Wadani, Kulmiye iyo Xaqsoor By luula Abdi(Hadhwanaagnews) Tuesday, August 28, 2012 Salaaaaaaam shebakadaha warbaahinta ee sharafta le:
Salaaaaaaam shebakadaha warbaahinta ee sharafta le:
Xisbiyada inta calaacaleysaa dalka in ay doorasho ka qabsoonto ma rabaan.<?xml:namespace prefix = o />
Sadex xisbi ma rabaan in ay doorasho dhacdo oo wey ka baqayaan iyagoo tamar yaraantooda og dabeed waxay miciin sadeen ceyda Madaxweynaha iyo xisbiyada qaar kood. Sadexdaa xisbi waxay rabaan markey gudbi waayaan in ay denbiga dowlada saaraan sidii kuwii hore ee weli maxkamada sugaaya.
Fulow guuli kuu dhaweydaa!!!
Umadda, Ucid iyo Dalsan. Sadex xisbina wa la hubaa inay soo baxayaan oo doorashada ku guuleysanayaan oo dadaal rasmi ah ayey la yimaadeen
Kulmiye, Wadani iyo Xaqsoor.
Sadex xisbina iyagu soo daahiri maayaan oo san sankii ay ku soo bixi la haayeen ma hayaan, laakiin wey is dhaamaan iyaga qudhoodu...Allow sahal amuuraaa adaa noo aqoon lee.
Reys, Nasiye iyo Dalsan
Sadexdan danbe bal aynnu kala qaadno ee Reys haduu dadaal xoogan la yimaado waxa uu heystaa fursad uu xaqsoor kula tartamo. Labadaa xisbi loolan adag baa u yaal
Dalsan isaga Ismail Faqash oo lacagtii uu ka urursadey dalka markuu wasiirka daakhilga ahaa ayaa ka baxdey oo waa weel uu wax ku tuugo ama ku urur sado, intaana waxa u dheer in uu Muse Biixi na doonaayo in uu la dego.
Nasiye isagu ujeedo iyo ka jeedo midna malaha, tabaabul sha wanaagsana ma hayaan, tartan hagaagsana isumey diyaarin, dabeed macna badan malaha oo agendaha laga leeyey mid waadaxa maaha, wuxuun baa la ogyey in aannu tartanku ka dhab ahayn wax looga jeedaba.
luulaabdi@yahoo.ca Luula Abdi